Archive du 02-nov-2020
Azo tiavina toy ny zanaka ve ny zana-bady?
Antony maro ny mahatonga anao hitaiza zana-bady na mahatonga ny vadinao hanana zanaka hafa ankoatra ny anareo roa. Tsy hidirantsika aloha ny antony ho an'ny anio, fa ny vahaolana hahafahana miara-miaina sy mifankatia amin'ny zana-bady no ho resahina anio. Fahasoavana sy fitahiana mantsy izany mahay mitia zana-bady izany hoy ny fanazavana.Ahoana àry ny hatao hahatanteraka an'izany ?
Antony 5 mampisy mony ao an-damosina
Miandahy miambavy ireo olona manana olana aminny mony mipoitra ao an-damosina. Sady marary sy manelingelina izy ireny no mahasorena sy mahamenatra
Jus karaoty : Manadio rà
Legioma iray tena mahasalama ny karaoty. Fomba maro no afaka hikarakarana azy : hanina manta, andrahoina, atao lasary na atao zava-pisotro ihany koa. Manan-karena vitamina A, B1, B2, B6, C ary K izay tena mahasalama ny ranona karaoty.
Ovy nasiana saosy yaourt
Akora ilaina Ho anny dingana voalohany · Ovy lehibe, manify ny hoditra, 6 · Sira 6 tsongo
Zava-pisotro natoraly 4, manala tavy aminny kibo sy fe
Tena ilaina ny misotro rano indrindra raha hampihena tena. Ny rano no manadio ny taova aminny loto sy poizina sady mahatonga ny taova hiasa tsara.
I Sean Connery no mpilalao sarimihetsika nandray voalohany ny anjara toerani James Bond ao anatinio horonantsary nampitondraina ny anaranny mpilalao fototra aminy io ihany.
Sakafo atao « provision »
Tandremo ireto !
Fomba iray entina mandrindra ny fiainana ao an-trano, indrindra noho ny rotoroto, ny fanaovana « provision ». Vidiana isa-kerinandro, isam-bolana, hena, voankazo sns. Mila mitandrina anefa aminny fitahirizana ny sakafo, raha manao provision.
1. Tennis Louis Vuitton Pointure : 38A293;39A293;40A293;41A293;42A293;43A293;44 Prix : 345.000Ar- Page Facebook : Narindra Ramamonjs Contact : 034 58 833 07 / 033 54 683 15 / 032 84 301 74
ADY AMINNY TAZOMOKA Manampy ny vondrona JCR
Ady tany tao Toliara Niafara tamina tsatok'antsy sy vono olona
Ady tany mirefy 22 Ha no niafara tamina vono olona, ny faran'ny herinandro teo. Misy olona izay milaza fa tompon'ny tany ao avaratry ny tanànan'Anketraky Toliara ka nifanandrina tamin'ny mponina tao an-toerana.
AKAMA 67 HA 11 ny ankizy afaka CEPE, 13 afaka BEPC
Nahafa-po ny voka-panadinana CEPE sy BEPC ho anny Akaninny Marenina etsy aminny 67 ha na ny AKAMA taminity taona ity na dia teo aza ny fahasahiranana nateraky ny valanaretina COVID 19
Anjoma Betoho Nahazo lisea vaovao
Vita soa aman-tsara ilay lisea vaovao voalohany natsangana ao Anjoma Betoho, any Manjakandriana.
Ankizy 15 taona Saika voaolana raha tsy tonga fotoana
Mirongatra izay tsy izy ny fanolanan-jaza eto amintsika. Ny alinny alakamisy hifoha zoma 23 oktobra, teo dia zazavavy kely iray 15 indray no saika naolana tovolahy iray 24 taona, tao Ambolatera, distrikanAntsalova.
Antsangasanga - Ambatondrazaka Afaka tanteraka amin'ny fangerena ankalamanjana
Manodidina ny 600 isa ny lavapiringa miorina ao amin'ireo fokontany 4 mandrafitra ny kaominina ambanivohitra Antsangasanga ankehitriny.
CASTING BOGASY VIP Trano filatroana vaovao, hanandratra an'i Madagasikara
Herintaona amin'ity taona ity no nijoroan'ny marika akanjo vita malagasy Bôgasy. Ho entin'izy ireo manamarika izany dia nisy ny "casting" lehibe izay notanterahina teny Antaninarenina ny faran'ny herinandro lasa teo hifantenana ireo olona eo
Covid-19 (24 -30 Oktobra) Tsy nisy ny maty, 143 ny tranga vaovao
Toy izao indray ny antontanisa maneho ny fivoaranny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara nanomboka ny 24 ka hatraminny 30 Oktobra 2020.
Fifaninanana "First Global Challenge" Nahazo mari-pankasitrahana betsaka indrindra isika
Tontosa ny Asabotsy hariva teo ny fanambarana tamim-pomba ofisialy ny valinny lalao iraisam-pirenen'ny robotika "First Global Challenge". Nisy ny lanonana natao tao aminny tranobenny ORTM Anosy nahafahana nanaraka mivantana ity lanonam-pamaranana ity.
FIONDRANANA AN-TSOKOSOKO MIAZO ANI MAYOTTE Malagasy 27 isa no naverina
Lehilahy miisa 3 tomponandraikitra tamina fampitana olona an-tsokosoko miondrana an-tsabokely mihazo ny Nosy Mayottes sy tera-tany Malagasy miisa 27 no voasambotry ny Polisy mpiandry sisin-tany any aminity Nosy ity ka naverina eto Madagasikara ny talata 27 oktobra teo.
Holafitry ny mpitsabo Nampahatsiahy ny lalàna mifehy ny asa fitsaboana
Nampahatsiahy ny lalàna mifehy ny asa fitsaboana ny filohan'ny holafitry ny mpitsabo eto Madagasikara, ny dokotera Eric Andrianasolo.
Kaominina Antananarivo Renivohitra Mpifankatia 24, vita soratra miara-mizotra
Mpifamofo 24 isa, no natao soratra miara-mizotra, teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely, ny sabotsy lasa teo. Ny ben'ny tanàna Naina Andriantsitohaina, miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy, no nanatanteraka izany.
Vente privée "Bebeboo" Nahaliana ireo mitaiza kely
Tontosa soa aman-tsara tetsy aminny Skate Park Antanimena ny hetsika vente privée " Bebeboo & Compagnie". Trano eva am-polony mahery no nandray anjara tamin'ity hetsika ity ary nahazo anjara avokoa ny rehetra hatramin'ireo renim-pianakaviana aza.